Umhla My Pet » 11 Top kwiFacebook Amaphepha ngenxa Advice Dating Kwi 2015
Dating nolwalamano zizifundo abantu basoloko ufuna ulwazi malunga. Nangona kukho ngokuqinisekileyo afanelekayo iingcali ukuthandana uyakwazi ufune icebo, Kwiminyaka embalwa edlulileyo abakubonileyo ukuvela ukuthandana iingcebiso amaphepha kwi social networks. KaFacebook networking website inkulu zentlalo ezisebenzayo kwakhona likhaya inani lamaphepha ezifana.
Kukho kunjalo amanye amaphepha Facebook iingcebiso ukuthandana ukuba ziluncedo nesinika umdla ngaphezu kwabanye. Uluhlu ngezantsi iqulethe phezulu yethu 11. Ukukhangela le amaphepha amaxesha ngamaxesha ukuze kukunika imbono ecacileyo lwezinto ezenziwayo ukuthandana.
1. umphezulu 10 Best Dating Amanxiwa: Eli phepha Ngokusisiseko iphepha eendaba zentlalo www.top10bestdatingsites.com, iwebhusayithi zeeteksi phezulu 10 kwiziza ukuthandana esekelwe izinto ezahlukeneyo. nokuba, ihlala amanqaku yokwabelana ukuthandana ngamacebo ukuthandana exabisekileyo kunye advices; ezi ziquka bhala-ups epapashwe kwi top10bestdatingsites.com kunye nezinye iindawo eziliqela. Emva kokuvavanya uluhlu lwezifundo loo manqaku egubungele, kunokuthiwa ukuba izisombululo kangangoko kunokwenzeka ukuba uninzi imiba yakho ukuthandana Alithandabuzeki ezimele kuzo.
2. Dating Tips for Men: Igama page yenza injongo yaso ngokucacileyo. nokuba, ngoxa abantu baya kufumana icebiso eyoyikekayo nolusebenzayo ukuthandana kweli phepha, abafazi Ungacofa iqhosha Kanye yaye siqhubeke khangela ukuba ukuqonda amadoda ebomini babo ngcono.
3. Ubudlelwane kunye Dating: Lo omnye iphepha enceda abantu bafunde izinto ezahlukeneyo ukuthandana nobudlelwane yamabali ebomini.
4. The DIVAS Dating: Yinto iphepha eziqhutywa liqela loomama sele etshatile kwamanye amadoda emangalisayo ngokwenene kwaye ngoku Ndiqhuba website ekuthiwa http://www.thedatingdivas.com/ ukunceda abantu ngokubonelela mal, kodwa iingcamango ukuthandana zokuyila.
5. Dating & Relationship Dos noMAWUNGAKWENZI: Eli phepha lizisa ukuba uthandane nolwalamano iingcebiso ezivela kwiingcali ubudlelwane phezulu.
6. The Ngesiquphe Single Girl-Dos ezenziwayo Dating Internet: Ukuba akutshatanga kwaye lithemba ukuphithikeza le yenye page FB kufuneka agcine esweni ukuthandana advices kuluncedo ngokwenene.
7. Lisa Copeland- Lo Dating Coach owenza Dating Fun lula emva 50: Njengoko umxholo wayo ubonisa, eli phepha FB iqhutywa Lisa Copeland. Copeland umntu odumileyo Huffington Post webhlogi yaye ngokukodwa eyaziwa ngokunika iingcebiso kakhulu ukuthandana abafazi phezu 50.
8. Mingle2: Nakubeni iphepha Facebook yomnye websites ukuthandana uthandwayo http://mingle2.com/, Mingle2 yindawo enkulu abantu befuna amacebo ukuthandana olusebenzayo.
9. Amanxiwa Dating Millionaire: Eli phepha ke wena ukuba ngusozigidi kwaye babekhangela liqabane elifanelekileyo okanye ngokuphendululekileyo. Ezi ngcebiso ngokusebenzisa bhala-ups kunye nohlaziyo kufakwa kweli phepha kuya kwandisa amathuba okuphumelela kakhulu.
10. Ukuthandana for Marriage Love Quotes Ukuthandana Tips Advice Ulwalamano for Women: Ukuba umfazi kwaye ufuna ukuya kumhla womtshato, eli phepha unelungelo iseti tips ukuthandana kuwe.
11. ulwalamano, Dating, Umtshato Divorce: Kweli phepha FB, uya kufumana iingcebiso yokusingatha ngamnye kwisigaba ubudlelwane wayekwazi kuquka nqanaba ukuthandana.
ezi 11 amaphepha facebook zizaliswe umkhululise amakhulu amawaka iingcebiso ukuthandana. nokuba, ukuze uqinisekise ukuba ufumana liqabane elifanelekileyo, kufuneka usebenzise ikwasithi ngokwakho zilandelayo loo macebiso.
Ukuthi Hayi Imihla buthuntu First